Tinogona kubhadhara neApple Watch tisina iyo iPhone padyo? | Ndinobva mac
Tinogona kubhadhara neApple Watch tisina iyo iPhone padyo? Uyu ndeimwe yemibvunzo iyo vashandisi vanga vachitibvunza kwenguva yakareba uye kupedza kusahadzika kwekuti sarudzo iyi inowanika paApple smart wachi inogona kuburitsa, zvakanaka kuti uisiye yakanyorwa pano.
Hongu mhinduro kumubvunzo ndihungu Uye hazvidiwe kuti uve ne iPhone kumusoro kubhadhara zvaunotenga neApple Pay sezvo zvisiri zvakafanira kuve neApple Watch neLTE (iine data) yekubatana kweWiFi kana zvimwe zvakafanana.
Uye isu hatisi kuzongokwanisa kubhadhara neApple Watch yedu tisina kufukidzwa kwerudzi rupi zvarwo, isu tinogona zvakare kuita zvinotevera zviito neApple Watch:
Tinogona kuona mafoto emaAlbham akawiriraniswa newachi, ramba uchiita chiitiko chemuviri uye chengetedza mashandiro, teerera kumumhanzi wakaenderana newachi, rekodhi manotsi ezwi kana mune vashandisi vane Series 5 vanoshandisa kambasi pakati pevamwe mashandiro. Saka usafunge kuti kushandisa Apple Kutarisa zvinogara zvichida kubatana kweLTE kana kubatana kweWiFi, sezvo zvisiri zvakafanira kuve ne iPhone nesu kuti tikwanise Nakidzwa nemikana yese inopihwa newachi.
Isu tinovimba kuti kusahadzika kunogadziriswa nechinyorwa chino uye kuti vese avo vane imwe mumaoko avo vanoziva sarudzo dzavanogara vachiwanzo, usingatore zvinopfuura wachi pawrist yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tinogona kubhadhara neApple Watch tisina iyo iPhone padyo?
Ruya, mutambo wepuzzle uyo uchakushamisa iwe